fanontaniana Nosy Canary.
5 volana 2 andro lasa izay #1239 by josmor
Vao avy nandefa ny rindrankajy 1 sy 2 an'ny Canary Islands aho. Nefa manamarina aho fa ny vokatr'ilay video dia miasa miaraka amin'ny REX 2.0 ihany. Nodinihiko ny aterineto, ary tsy nahita izany aho. Ahoana no ahafahako mahazo ny vokatra tsara eo amin'ny Nosy Canary?
5 volana 2 andro lasa izay #1240 by Dariussssss
Mankasitra ary mankasitraka an'i Rikoooo.
Ireto misy toerana kely tsy mety handefasana ny olana atrehanao amin'ny simanao. Azafady azafady ity olana ity amin'ny lohahevitra tsirairay, na ny FSX na P3D.
Hanao izay vitantsika izahay mba hanampiana anao.